यसरी हुन्छ नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी - Kantipath.com
जयनगरमा नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी गर्नेलाई पक्राउ गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि सोही अभियोगमा त्यहाँ मदिरासहित धेरैजना पक्राउ परिसकेका छन्। धेरैजना अझै थुनामै छन्। तर नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी रोकिने त परको कुरा, झन्झन् बढ्दो छ। भारतको बिहार सरकारले मदिरा निषेधित गरेपछि नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय गाउँसहरमा तस्करी हुँदै आएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।।
Previous Previous post: १२ मिनेटमा ४ गोल गर्दै बार्सालाई कोपा डेल रेको उपाधि
Next Next post: बार्साले जित्यो कोपा डेल रेको उपाधि : १२ मिनेटमा ४ गोल
सभामुखमा नेम्वाङ दोहरिने अबस्था छ त?
बसमा यात्राका क्रममा बेहोस भएका एक व्यक्तिको मृत्यु
दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा एक घर एक पीसीआर
उपत्यकामा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा : अब के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्तो छ नयाँ आदेश
२४ सेकेण्ड अगाडी